musha More Boxers Bio Sergey Kovalev Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Childhood Biography inopa Nyaya Yakazara yeRussia Boxer ine zita remadunhurirwa "Krusher".
Yedu Sergey Kovalev Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Sergey Kovalev Biography - Kubva pamazuva eUdiki hwake kusvika panguva yaakazozivikanwa.
Hongu, munhu wese anoziva nezvesimba rake rinoshamisa rekurova. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezve Sergey Kovalev's biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Sergey Kovalev Upenyu hwepakutanga uye Imba Yemhuri:
Nokuti Biography kutanga, Sergey kovalev akaberekwa musi we 2nd waApril 1983. Nzvimbo yekuzvarwa yeBoxer iguta reKopeysk muRussia. Akazvarwa kuvabereki Avo vashoma vanozivikanwa nezvake panguva yekunyora iyi bio.
Rudzi rweRussia rwemadzinza evachena chena aine midzi midiki inozivikanwa kubva kune yakaderera-yemhuri mhuri uye akakurira kuguta rake rekuzvarwa muKopeysk kwaakakurira pamwe nehama mbiri dzine hunhu dzadzo dzichiri kunyatsosimbiswa.
Kukurira kuKopeysk, mudiki Kovalev akarererwa muhurombo hwakanyanya akaona mhuri yake ichirarama nekudya kunonaka kwechikafu chakakura.
Zvisineyi, aive nehungwaru hwepamoyo uye kufara kwevezera rake uye akatora chikamu mu ice hockey semutambo wehudiki.
Sergey Kovalev Dzidzo:
Panguva iyo Kovalev aive zera 11 mu1994, akafemerwa kutanga kuvaka basa mumutambo wetsiva mushure mekunge shamwari yataura naye mairi.
Kunyanya zvakadaro, maposta emutambi Van Damme anofukidza madziro eimba yekurara yaKovalev akasimudzira chisarudzo chake chekuva munhu anotora chikamu mukurwa kwakanaka.
Hazvina kutora nguva refu Kovalev asati apinda mune yekurovedza muviri kwaakadzidziswa pane hwaro uye hunhu hwemutambo.
Panguva iyo Kovalev aive pairi aive achiita mashoma mashoma mabasa sekutengesa mapepanhau, kugeza mota uye kuzadza matangi egasi kuti awane raramo.
Sergey Kovalev Bio - Yekutanga Basa Rehupenyu:
1987 ndiro gore iro nhoroondo dzetsiva dzinotora sekutanga kwenhoroondo yebasa rekutanga raKovalev. Rakanga riri iro gore iro prodigy wetsiva akaita mutambo wake wetsiva uye nekukasika akatora zita muRussian Boxing Junior Championship yechikamu chepakati.
Kovalev akaitawo kuonekera kwechikwata Russia mumakundano eEuropean pamwe nemakwikwi eRussia makuru asati apedzisira ave nyanzvi mugore ra2008 aine amateur rekodhi ya195-18.
Sergey Kovalev Biography - Rwendo rweKukurumbira:
Kukwira kuburikidza nematanho ehunyanzvi tsiva raive basa risina musono kuna Kovalev uyo akaranga vapikisi nehutsinye husingawanzo pakati pemakore 2009-2011.
Kukunda nekukunda, Kovalev akazvisimbisa semurwi anotyisa munyika yetsiva uye akaita kuti vangamupikisa vape nguva yakawanda yekudzidzira mumitambo yekusimbisa muviri.
Nhamo yakaitika mukupera kwa2011 apo Kovalev akakunda TKO achikunda mumwe wake Roman Simakov, uyo akazofenda zvichitevera kurwa kunotyisa kwemaround manomwe kuEkaterinburg.
Yakanga ichingova nyaya yemaawa makumi maviri neshanu nhau dzinoshungurudza dzekufa kwaSimakov dzisati dzasvika nekupedza simba Kovalev kwemwedzi.
Sergey Kovalev Bio - Iyo Yakabudirira Nyaya:
Kutora kumusoro kubva kwaakasiya, Kovalev akatora kukunda muhondo yake yakatevera ye13. Nekuita kwakadaro, zvaive nyore kudonhedza pasi kukunda kwe3 iyo yaitsvaga kukanganisa zvinyorwa zvake zvinoshamisa mu2016, 2017 uye 2018.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora, Kovalev ane hunyanzvi rekodhi ye34 anokunda, 3 kurasikirwa uye 1 dhizaini.
Kure kure nekukunda kwaKovalev, iye ari underdog anozivikanwa nesimba rake rekurova iro vateveri vanofunga kuti raizove rinotyisa Canelo Alvarez pazuva reuso-yavo (2nd Mbudzi 2019). Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Sergey Kovalev Mudzimai uye Vana:
Kuenderera mberi kune hupenyu hwerudo hwaSergey Kovalev. Akaroora panguva yekunyorera mudiwa wake achiri kuyaruka akatendeuka mukadzi Natalia Kovalev. Vaviri ava vakasangana kugym apo Kovalev aive achivaka basa retsiva.
Vakafambidzana kwemakore uye pakupedzisira vakaendesa ukama hwavo kunzvimbo yewanano. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Kovalev haazivikanwe kuve aine chero musikana asati asangana naNatalia.
Kubatana kwake naye kwakakomborerwa nemwanakomana, Aleksandr Kovalev pamwe nemwanasikana, Milana Kovalev.
Sergey Kovalev Hupenyu Hwemhuri:
Sergey Kovalev ane mashoma anozivikanwa mabviro emhuri. Isu tinopa chokwadi pamusoro pehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba naamai vaSergey Kovalev:
Kovalev akarerwa nevabereki vachiri kuzozivikanwa nekuda kwezvikonzero zvakati. Kutanga, mutambi wetsiva anochengetedza zvakanyanya nezve nyaya dzine chekuita nehupenyu hwake hwega uye hwakavanzika zvekuti haawanzo kukurukura nezvemhuri panguva yekubvunzurudzwa.
Kupfupisa zvese, chero nguva Kovalev paanopemberera vanamai nemababa zuva pasocial media, anozviita nemifananidzo yake kana yemukadzi wake nemwanakomana wavo Aleksandr Kovalev nemwanasikana Manila Kovalev.
Nezve hama dzaSergey Kovalev uye hama:
Mhuri diki inozivikanwa yaSergey Kovalev inosvika kune vanin'ina vake sezvo pasina marekodhi nezvevanin'ina vake nehanzvadzi, uye sekuru nasekuru vake nasekuru nasekuru nasekuru vake havana kuzivikanwa panguva yekunyora.
Saizvozvowo, babamunini, babamunini, babamunini, babamunini, babamunini pamwe nababamunini havana kunyanya kuzivikanwa.
Sergey Kovalev Hupenyu hwepamoyo:
Taura nezvehunhu hwaSergey Kovalev, ane chimiro chinotyisa chinobatanidza kuteedzera uye kushingairira hunhu hwevanhu vanotungamirirwa neAries Zodiac hunhu.
Anosimbisa, kusimba uye haawanzo kuburitsa pachena nezve hupenyu hwake uye hwakavanzika. Zvaari kuita uye zvaari kufarira zvinosanganisira kuona mafirimu, kutamba ice hockey pamwe nekupedza nguva nemhuri yake neshamwari.
Sergey Kovalev Mararamiro:
Iwe unoziva here kuti Sergey Kovalev ane inofungidzirwa mambure anosvika mazana mana emamiriyoni emadhora? Panguva yekunyora iyi bio?
Ongororo yezvikamu zvinoumba hupfumi hwaKovalev huri kukurumidza kusimuka hunoratidza zvimwe zvinhu. Kuti anowana mari yakawanda mukuedza kwake kwebhokisi uye kutsigira.
Zvakadai, mutambi wetsiva ane midziyo inotaura zvakanaka nezvemararamiro ake eumbozha. Umbozha uhwu hunosanganisira imba yemamiriyoni emadhora kuFort Lauderdale kuFlorida, USA.
Kuseri kwemasuwo eimba huru kune mota dzeKovalev. Iyo inozvirova dundundu yezvikwiriso zvinogadzirwa nemhando seBMW pakati pevamwe.
Chitendero chaSergey Kovalev:
Sergey Kovalev mutendi akambobvuma kuti Mwari vakamuponesa mutsaona yaigona kuuraya. Mamiriro echitendero chake haagone kusimbiswa zvizere panguva yekunyora. Uye mikana iri mukuda kwake kuve mukristu.
Body arts inyaya yekupedzisira pane yeboxer's list yezvaanofarira. Sezvo kutaridzika kwake kunotyisa uye kureba kwe 1.83m kuita ma tattoos kusafanira.
Kovalev haapute, uye haapihwe kunwa panguva yekunyora. Anonyanya kukoshesa kuchengetedza mararamiro ane hutano. Sezvaakaisa maziso ake pa clinching nekuchengetedza mamwe mazita ebhokisi
Thanks for reading vedu Sergey Kovalev Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!